I-Samsung Galaxy Fold: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | I-Androidsis
Ufikile umhla. Emva kweenyanga ngamarhe kunye nobuninzi bokuvuza, Isamsung yazise ngeGold Fold, i-smartphone yayo yokuqala yokusonga, ngokusemthethweni. NgoNovemba wokugqibela Kufike umboniso wokuqala wesixhobo, apho ungabona ngokufutshane uyilo oluthile. Ke ngoJanuwari besinedatha entsha malunga nesixhobo kwi-CES 2019. Ekugqibeleni namhlanje yenziwe ngokusemthethweni.
Le fowuni ibisematheni kuzo zonke ezi nyanga. Nayizolo sifumene ulwazi malunga nayo, njengegama lakho. Kodwa i-Samsung Galaxy Fold ekugqibeleni isemthethweni. I-smartphone ebizelwe ukuguqula intengiso kunye noyilo kunye neenkcukacha. Yintoni esinokuyilindela kuyo?
Isamsung icebisile iphinde ibuye isikhundla sayo njengenye yeenkampani ezinobuchule kwintengiso. Ngesi sizathu, uphawu lufuna ukubhiyozela isikhumbuzo seminyaka elishumi seGlass yokuqala ngesi sixhobo. Ukuba iApple isungule i-iPhone X ngomhla wayo, amaKorea asishiya nale Galaxy Fold. Isixhobo abafuna ukoyisa kwimarike.
1 Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy Fold
2 I-Samsung Galaxy Fold: Eyona nto iphambili kwi-smartphone
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy Fold
Esi sixhobo siyindibaniselwano yoyilo kunye neenkcukacha. Ayisekelwanga kuphela ekubeni yimodeli yokusonga kunye noyilo olutsha kwintengiso, kodwa sikwafumana iinkcukacha kubude besixhobo. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kwe-Samsung Galaxy Fold:
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Samsung Galaxy Fold
Umzekelo Galaxy Fold
Inkqubo yokusebenza I-Android 9 Pie ene-UI enye
Isikrini I-4.6 intshi HD + Super AMOLED (21: 9) isibonisi sangaphakathi kunye ne-7.3-intshi ye-QXGA + yeDynamic AMOLED (4.2: 3) infinity Flex bonisa
Inkqubo I-Exynos 9820 / i-Snapdragon 855
Ukugcinwa kwangaphakathi I-512 GB UFS 3.0
Ikhamera esemva I-16 MP f / 2.2 ye-angle ebanzi ye-12 MP Dual Pixel ububanzi-engile eneferture f / 1.5-f / 2.4 kunye ne-optical image stabilizer + 12 MP telephoto lens ene-magnification zoom zoom kunye ne-f / 2.2 ukuvula
Ikhamera yangaphambili Ilungu le-MP eli-10 f / 2.2. + 8 megapixel f / 1.9 isivamvo sobunzulu kunye ne-10 MP f / 2.2 kwiphepha elingaphandle.
Conectividad I-Bluetooth 5.0 A-GPS GLONASS Wifi 802.11 ac USB-C 3.1
Ezinye izinto Icala lekhampasi yokufunda iminwe yegyroscope NFC
Ibhetri 4.380 mah
U bunzima I-200 gram
Ixabiso IRandi ye1980
Le modeli ibe ngumceli mngeni kwi-Samsung. Inkampani ithe izixhobo ezintsha kunye neenkqubo zokuvelisa ziye zaphuhliswa ukwenza ukuba kwenzeke ukuba le modeli ifike kwintengiso. Umzekelo, indlela egobe ngayo kubalulekile. Kuba le modeli isongele ngaphakathi. Ke xa uguqa, imiphetho yesikrini iyasondela kunye.
Xa isongwe, Sifumana isikrini esikhulu se-intshi ezingama-7,3 kwisixhobo. Ngelixa ifemu yazise ngescreen se-4,6-intshi yesibini. Yintoni eya kuvumela ukusetyenziswa okuninzi kwefowuni ngokuxhomekeke kwimeko. Zombini izikrini zifika ngesisombululo esikhulu. Ingakumbi enkulu, eyilelwe ukusebenzisa umxholo ngawo onke amaxesha.
I-Samsung Galaxy Fold: Eyona nto iphambili kwi-smartphone
Umbono waleGold Fold kukukwazi ukuba nesixhobo esiguquguqukayo kwimeko nganye. Xa isongelwe, inokubanjwa entendeni yesandla. Ngelixa ivuliwe, ungabukela iividiyo ngeyona ndlela ifanelekileyo. Isamsung iyichaza njenge i-smartphone, ithebhulethi kunye nekhamera kwisixhobo esinye. Inkcazo elungileyo yesi sixhobo.
Ukwenza imisebenzi emininzi kubalulekile kwesi sixhobo. Ke ngoko, i-Samsung iya kukuvumela ukuba ube nezicelo ezintathu ezivulekileyo ngexesha elinye xa zisetyenziswa kwimowudi yethebhulethi. Ke unokubukela iividiyo kwaye ube neeapps kwisixhobo ngaxeshanye. Oku kuyakuvumela ukuba uvule ii -apps ezibaluleke kakhulu ngawo onke amaxesha ngendlela elula. Isamsung isebenze neenkampani ezinje ngeGoogle kunye neMicrosoft kule nkqubo, ukwenza ukuba kwenzeke. Iiapps zisasazwa ngaphezulu komphezulu wescreen, ngendlela ezinokuthi zivuleke zonke, kodwa zisebenzise ngesiqhelo ngaxeshanye. Ukongeza, kunokwenzeka ukutshintsha ubungakanani bezi zikrini ngendlela elula.
Iikhamera ezintandathu yile nto siyifumana kwisixhobo. Iikhamera ezintathu ngasemva, ezimbini ngaphakathi enye ngaphambili. Ke uneekhamera zekona nganye enesiphelo esivela kwimpawu yaseKorea. Ngokuqinisekileyo siyayibona indlela ukufota okufumene ngayo ukufaneleka kolu luhlu lwefemi. Umdibaniso onamandla, esinokuthi ngawo sifumane uninzi kwisiphelo esiphakamileyo kuzo zonke iintlobo zeemeko.
Ibhetri yayiyinto ephakamisa ukuthandabuza. Ungayifumana njani ibhetri kwi-smartphone esongelayo? Isamsung isombulula ngokulula kule Galaxy Fold. Babheje ngeebhetri ezimbini. Ke sinako ukuzimela ngokwaneleyo emnxebeni ngalo lonke ixesha, ukongeza ekubeni yinto entsha eyiSamsung. Ngokuba neebhetri ezimbini eziza kusebenza kwi-smartphone efanayo. Kule meko sinesikhundla se-4.380 mAh. Akukho nto ikhankanyiweyo ngoku malunga nokutshaja ngokukhawuleza kwisixhobo.
Ukongeza ekwazini yonke into malunga nale smartphone, i-Samsung ikwasishiya sinolwazi malunga nomhla wokumiliselwa kwemakethi, ukongeza kwixabiso layo. Kuninzi ukuhletywa malunga nexabiso eyayiza kuba nalo leGold Fold. Kodwa ekugqibeleni sele sinayo yonke idatha malunga nayo. Nangona besisele sazi kwangaphambili ukuba le modeli ayizukubabiza ngokwexabiso. Ngaba ifowuni idlula ixabiso ebesinalo engqondweni?
Ukongeza kwixabiso layo, enye inkcukacha enomdla kuthi ngumhla wokuqaliswa kwesixhobo. Enye into malunga namahemuhemu amaninzi kwezi nyanga. Ngethamsanqa, sele sinazo iimpendulo kula marhe. Ukuphehlelelwa kwayo kwintengiso kuya kuqhubeka ukusuka nge-26 ka-Epreli. Ke kufuneka silinde iinyanga ezimbalwa de ibe inokuthengwa ezivenkileni.
Ukuqaliswa kwimibala emine: Luhlaza, igolide, isilivere kunye nomnyama. Ukongeza, kuxhomekeka kumbala, kunokwenzeka ukuba wenze ngokwezifiso indawo apho isixhobo sigobe khona. Ke umsebenzisi ngamnye uya kuba nakho ukumisela inkangeleko yeGold Fold yazo. Ngokubhekisele kumaxabiso, iphehlelelwe ukusuka kwi- $ 1.980 ngexabiso ukuya kwiivenkile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » IGolden Fold: Ifowuni ye-Samsung yokusonga ngoku isemthethweni